.: အိပ်မက် အပိုင်းအစများ
အိပ်မက်ထဲမှာ သူမသည် သူမ၏ ချစ်သူနှင့် အတူအချစ်ကို ပျော်ဝင်ပြီး ခံစား ချက်မီးတစ်စစီနှင့် အပြိုင်အဆိုင် လောင်မြိုက်နေခဲ့သည့် အတွက် ရင်ကွဲပက်လက် မျက်ရည်စက်များဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။ “ဘာဖြစ်လို့များ
ကျောခိုင်းလိုက်ရတာလဲ”ဆိုသော မသဲမကွဲ စကားသံများကြားမှာ အလွမ်းညသည် မိုးစုံးစုံးချုပ်သည်ထက် ချုပ်လာခဲ့လေပြီ။
သူမသည် ချစ်သူ အပေါ် ချိုမြိန်ခြင်းများနှင့် သာယာမှုကို ပေးစွမ်း လိုသော်လည်း သူမ၏ ချစ်သူပေးသော ခါးသက်ခြင်းများကိုသာ သူမကိုယ်တိုင် စားသုံးရင်း၊ သူမ၏ အိပ်မက်ရှည်ကြီးထဲတွင် လွင့်မျောလိုက်ပါ နေသည်။ “ချစ်သူ လွမ်းဆွတ် တမ်းတခြင်းနဲ့ ငိုကြွေးသံတွေ ကြားမှာ ကျွန်မ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြိုယွင်း ခဲ့ရသလို ကျွန်မ အိပ်မက်တွေထဲကို ရှင်မလာတာ ကြာနေလို့ အိပ်ဆေးသောက်ပြီး လွမ်းနေရတာ ရှင်သိရင် ပြောဦးမယ် . . . ခေါင်းမရှိတဲ့ သေချင်း ဆိုးမလေးလို့လေ”